Maalinta: Meey 19, 2020
Sidee loo Helaa Ogolaanshaha Safarka? e-Shaashadda Oggolaanshaha Safarka ee Dowladda: Maxaad u baahan tahay inaad hesho Ruqsadda Safarka? Kumaa heli kara Dukumentiga Ogolaanshaha Safarka? Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu yiri, “rukhsadaha safarka ee kumeelgaarka ah [More ...]
KPMG Turkey waxay ahayd inay qiimeyso saamaynta uu ku faafay cudurka coronavirus qaybta saadka. Adduunyada oo dhan oo ku saabsan hawada, dhulka iyo taraafikada, taas oo muujineysa in istaafku uu ku xirnaa yahay rakaabka Gaadiidka Hoggaamiyaha waaxda Gaadiidka, KPMG Turkey Yavuz Öner ugu weyn. [More ...]
KOSGEB waxay taageeri doontaa ilaa 70 TL shirkadaha si ay tababar uga helaan Model Fabrika, oo ay soo saartay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee BursO si loo hago isbadalka dijitaalka ah ee shirkadaha warshadaha ee Bursa. KOSGEB [More ...]
Rakaabkeena Qaaliga ah, May 19, 1919, isagoo hogaaminaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk, shacabka Turkiga waxay ku guuleysteen halgankayaga madaxbannaanida iyadoo la rumeysan yahay "mid madaxbanaan ama geeri", iyo jiritaanka shacabka Turkiga ee Anatolia. [More ...]
In kasta oo xaqiiqda ah in Ordu leedahay xeeb ku taal badda, kama faa'iideysan karto badda meel kasta oo ay ku taal. Mehmet Hilmi Güler wuxuu sii wadaa inuu wado mashruuc ka dhigaya magaalada mid nabad ka dhalata badda. Tan [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo ahmiyada siisa mashruucyada gaadiidka si ay muwaadiniintu ugula safraan dariiqa raaxada leh wadooyinka iyagoo wata gawaaridooda, waxay sidoo kale fuliyaan shaqada dayactirka iyo hagaajinta wadooyinka sii xumaaday. Waaxda Arimaha Sayniska [More ...]
Intii lagu guda jiray booqashada Madaxweynaha Ekrem İmamoğlu 12 Oktoobar 2019, ,BB Park, Garden iyo Green Areas Department waxay ka dhigtay Atatürk Forest Forest ee Hacıosman inay diyaar u ahaato waqtigeeda. Cudur calaami ah [More ...]
Duqa Magaalada İmamoğlu wuxuu magacaabi doonaa ilaha ugu horeeya ee İkitelli Ataköy Metro Line; Jidadka tareenka waxaa la dhigayaa İkitelli-Ataköy Metro Line, oo ka mid ah nidaamyada tareenka ee muhiimka ah ee dhinaca Yurub, oo dhismihiisa la dardar geliyay. Munaasabadda alxamidda ee ugu horreysay ee waddooyinka tareenka İBB Madaxweynaha Ekrem İmamoğlu [More ...]
Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer ayaa ka qeyb galay xuska sanadguuradii 19aad ee 101 May Xuska maalinta Atatürk, Maalinta dhalinyarada iyo isboortiga iyada oo la eegayo cabirrada Corona-ga. Madaxweyne Soyer wuxuu Atatürk ugu dabaaldegay Fagaaraha Cumhuriyet 07.00:XNUMX [More ...]
Maareeyaha guud ee shirkadda Burulaş Kürşat Çapar, oo la wadaagay xogta naxdinta leh ee ku saabsan gaadiidka dadweynaha ee ay ku dhacday duufaanta, ayaa sheegay in tirada rakaabka ay hoos u dhacday boqolkiiba 85. Isagoo sheegay in sharciga 50% ee awooda rakaabka uusan aheyn mid waara, ayuu yiri Capar: [More ...]
Gudoomiyaha İTOB Acar ayaa u soo bandhigay wasiirka Varank inuu ku sameeyo tijaabada Kovid-19 ee İTOB. Dhanka kale Acar wuxuu balan qaaday wadad iskuxiran 335 OIZs, 55.000 warshad iyo 2.000.000 shaqaale [More ...]
EGİAD Aegean Ganacsato Da'yar ayaa sii wadaysa inay sii waddo siminaaro-wejiyadaha 'webinar' sababtoo ah Covid 19. Ururada aan dowliga aheyn ee ugu awooda badan dowlada Turkiga oo kuyaala inta udhaxeysa martida ugu dambeysay ee EGIAD [More ...]
Diyaarad cirka ka duushay oo laga leeyahay Royal Canadian Air Force ayaa burburtay iyadoo qabaneysay duullimaad mudaaharaad ah oo lagu taageerayo dagaalka ka dhanka ah coronavirus. Pilot Jennifer Casey ayaa shilka ku dhintay, halka duuliyaha kale Richard MacDougall [More ...]
Waqtigaan, marka xiisaha ay u leedahay soo iibsiga internetka iyo macaamil xawilaadda internetka ay korodhay sababtuna waa nooca cusub ee coronavirus (Kovid-19), khibradda gawaarida, oo ay ka doorbidayaan kuwa doonaya inay iibsadaan gawaarida, sidoo kale waa adeegga ballanta internetka. [More ...]
Marka lagu daro amar ka qaadista Taliyaha Ciidanka Badda Taliska Ciidanka Badda oo la siiyo Taliyaha Guud ee Ciidamada, Sareeye Cihat Yaycı (sababihii aan u maleynayay inuusan ka haynin taageero iyo inuu helo calipers) codsigiisa is casilaadda, [More ...]
Waxaa loo yaqaanaa naqshadeeyaha istaraatiijiyadda bariga bari ee Turkiga iyo Istaraatiijiyadda Liibiya Rear Admiral oo ka tirsan Taliska Ciidamada Badda ee Jihaad Yayci kadib markii howshaas la sheegay in madaxa shaqaalaha uu is casilay. Sida ku xusan qoraallada, Wasaaradda Gaashaandhigga Qaranka [More ...]
Qiyaastii 15 boqolkiiba dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 24-18 ee ku nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. In kasta oo heerka is-diiwaangelinta ee dugsiga sare uu yahay 88,8 boqolkiiba, 259 kun oo dhalinyaro ah ayaan waxna qorin waxna qorin. Shaqo la’aanta dhalinyarada ilaa 24,8 boqolkiiba, qeexitaan ballaaran [More ...]
Ciidamada Difaaca Cirka ee Japan waxay si rasmi ah u bilaabeen diyaaraddii ugu horreysay ee 'Hawlaha Hawada' ee waddanka xaflad lagu qabtay Wasaaradda Difaaca ee Tokyo May 18. Afayeen u hadlay ciidamada difaaca cirka Japan Janes ayaa u sheegay Fuchu galbeedka Tokyo [More ...]
Imamoglu wuxuu ka soo qeybgalay Munaasabadda 19 May ee Taksim
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu ayaa ka qeybgalay munaasabad dejin ah oo lagu qabtay Xuska Taksim Republic Monument iyada oo loo eegayo Xuska 19 May Xuska Atatürk, Dhacdooyinka dhalinyarada iyo Ciyaaraha. Ekrem İmamoğlu, Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM), 19 [More ...]
Wasaaradda Ganacsiga waxay dardar gelisay howlaheedii waxbarasho ee jawiga dijitaalka ah. Wasaaradda Ganacsiga, Amazon, oo hirgelisay codsiyada tababarka sida Virtual Trade Academy, Akademiga Dhoofinta iyo albaabka tababarka internetka ee Facebook iyo SMEs. [More ...]
Xornimada, xorriyadda iyo aasaaskii Jamhuuriyadda Turkiga ee 101 sano ka hor May 19, 1919, Hoggaamiyahayaga weyn Mustafa Kemal Ataturk, wuxuu bilaabay dagaalkii madax-bannaanida ee Samsun. Waxay leedahay dal madaxbanaan oo xor ah [More ...]
Waa kuma Admiral Cihat Yaycı?
Wuxuu ku dhashay Elazığ 1966, Yaycı wuxuu ka qalinjabiyey Dugsiga Sare Naval 1984 iyo Naval Academy 1988. Maraakiibta kala duwan ee Taliska Ciidamada Badda, sida sarkaalka laanta, madaxa waaxda iyo taliska [More ...]
Markii la furay Wadada Tareenka dhulka hoostiisa mara Janaayo 10, 1863, xilligii tareenka wuxuu gaadhay heer cusub markii uu shaqeynayey qoto dheer oo aan laga fileynin dariiqyada London. Wadada tareenka aduunka ugu horeeya, degmada dhaqaalaha degmada iyo Paddington [More ...]